Zavatra Mahavariana 5 Hita Amin’ny Sokatra “luth” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2014 10:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Aymara, English, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español
Ny soka-dranomasina “luth”. Sary nalaina tamin'ny vohikala Wikimedia Commons. CC-BY-2.0
Ny Fetben'ny Soka-dranomasina “luth” [es], atao amin'ity taona ity ny andiany fahasivy aminy, dia manaitra ny sain'ny daholobe ny momba ity soka-dranomasina ity, izay miverina manatody eny amoron-dranomasin'i Porto Rico isan-taona. Araka ny bilaogin'i CoquíPR [es]:
Ao Porto Rico, miha mihena ny isan'ny toerana fanatodizana noho ny fandrosoan'ny toerana amoron-dranomasina sy ny morontsiraka. Ny teikasa fanamboarana trano fonenana, toerana ho an'ny mpizahatany ary indostrialy no tena mahatonga indrindra io fihenan'ny toeram-ponenany io, eo koa ny fihitaran'ny tanàn-dehibe mankany amin'ny morontsiraka. Na dia izany aza, ny taratry ny jiro any amin'ny toerana mandroso ( ohatra : ny jiro mitodika mivantana any amoron-dranomasina) dia mahavery làlana ny sokatra na ny lehibe na ny vao teraka. Raha tokony hiverina any andranomasina izy ireo, maro amin'ireo vao teraka no very làlana noho ny hazavan'ireny jiro ireny ka mandeha any amin'ny làlana mifanohitra amin'ny tokony ho alehany, ary lanin'ny biby hafa any izy ireny, na voahitsaky ny fiara, na maty noho ny taratry ny hainandro. Manampy trotraka izany koa ny loza maro hafa izay atrehan'ny sokatra vao teraka mandritra ny diany ho any anaty ranomasina. Mety ho voaratran'ny biby hafa izy ireo ( ohatra : ny alika) na samborin'ny voron-dranomasina na drakaka.
Ny fanapotehana ny toerana fanatodizany, ny fangalarana atody , ary ny famonoana ny sokatra vavy rehefa miala ny toerana fanatodizany izy dia olana lehibe mianjady amin'ireny karazam-biby ireny. Mora voasarika hihinana zavatra vita avy amin'ny plastika eny andranomasina ny sokatra “luth” rehefa afangarony amin'ny bibin-dranomasina “méduses” ireny.
Mba hankalazana ny Fetinben'ny Sokatra “luth” ary hanampiana amin'ny fanaparitahana ny mombamomba azy, ireto misy zavatra dimy mahavariana momba ity biby ity:
1. Ny sokatra “luth” no soka-dranomasina lehibe indrindra eran-tany.
Ny boky nomerika Mi Puerto Rico Verde [es] dia manana loharanom-baovao maro momba ny endrika mampiavaka io sokatra io :
Ny sokatra “luth” lehibe indrindra voarakitra dia milanja 916 kilao, izany oe mihoatra kely ny 2,000 lb. […] Matroka ny lokon'ny sokatra “luth” ary misy tasy boriborikely miloko mavokely sy fotsy. Mora fantatra be izy amin'ireo tsipika mivoitra miisa fito toy ny tendrombohitra mitandahatra eo amin'ny lamosiny, ary ireo tanàna fivoiny, lehibe anoloana izay mampiavaka azy. Misy tasy mavokely eo an-tampon'ny lohany mampiavaka azy koa ireo vavy.
2. Ny sokatra “luth” no hany karazana soka-dranomasina tsy manana lamosina mafy.
Araka ny Amigos de las Tortugas Marinas [es], misy ezaka iombonana atao amin'ny fiarovana ny sokatra “luth” :
Mifanohitra amin'ny karazana sokatra hafa, [ny sokatra “luth”] tsy mba manana fonosana mafy, fa kosa fonosana hoditra izay misy tsipika mivoitra amin'ny halavàny miisa fito izay mitovy amin'ny fingotra tsy dia malama loatra rehefa tsapaina. Io endriky ny fonosany io, izay malefaka kokoa noho ny an'ny karazany hafa, dia natao hiatrehany ny tsindry mafy rehefa milomano midina any amin'ny lalina be izy izay mety mihoatra ny 3000 ft, lalina noho ny an'ny karazana sokatra hafa .
3. Ny volana sy ny kintana no fitarikandron'ny sokatra “luth”.
Olana lehibe ho an'ny sokatra “luth” ny fikorontanan'ny hazavana rehefa miverina any amin'ny toerana fanatodizany izy. Mitondra fanazavana ny antony ny boky niomerika momba ny tontolo iainana Corriente Verde [es] :
Mampiasa ny taratra hazavan'ny volana ireo sokatra vao teraka mba entiny hijerena hoe aiza ny làlany andehanany hihazo ny ranomasim-be. Izany no antony iray tsy tokony hanorenana trano lehibe na fanorenana hafa manakaiky ny ranomasina, satria mampikorontana na mitondra ny sokatra “luth” na ny lehibe na ny vao teraka ho amin'ny làlan-diso ny hazavana na ny jiro mazava be avy amin'ny trano avo, mahatonga azy ireo hieritreritra fa any amin'ny hazavan'iny takamoa iny ny làlana mankany an-dranomasina.
4. Ny sokatra vavy amin'io karazany io no mifindra toerana lavitra indrindra miohatra amin'ireo karazana soka-dranomasina hafa.
Aboraky ny fikambanana Amigos de las Tortugas Marinas misimisy kokoa ny halavirana mampitolagaga vitan'ny sokatra ” luth ” vavy rehefa mandeha lavitra :
Ireo sokatra vavy no manao fifindran-toerana lavitra indrindra amin'ny karazana soka-dranomasina rehetra. Amin'ireo toerana fihinanan-kaniny sy ireo moron-dranomasina fanatodizany, afaka mandeha lavitra mety hihoatra ny 3.000 miles na 6.000 km izy ireo. Sokatran'ny ranomasim-be ny sokatra “luth” izay miaina lavitry ny morontsiraka amin'ny ankapobeny afa-tsy rehefa amin'ny fotoana fanatodizany izay hiverenany eny amoron-dranomasina tropika. Rehefa avy miray any an-dranomasina izy, miverina eny amin'ny fasika mafana eny amoron-dranomasin'ny tropika ny vavy mba hanamboatra ny toerana fanatodizany ary mametraka atody manodidina ny 75 na 100 isa eo.
5. Ny hafanan'ny fasika no mametra na ho lahy na ho vavy ilay sokatra “luth” .
Mbola ny fikambanana Amigos de las Tortugas Marinas ihany no manazava bebe kokoa izany :
Ny hafanan'ny toerana fanatodizana no mametra ny filahiana na fivavian'ireo sokatra kely, ny mafana kokoa dia mahavavy azy ary ny mangatsiaka kokoa mahalahy azy. Noho izany, afaka eritreretina hoe ireo atody amin'ny farany izay mafana kokoa noho ny taratry ny masoandro eo amin'ny fasika dia ho lasa vavy ary ireo any amin'ny lalina ho lasa lahy, fa tsy tahàka izany foana anefa ilay izy, satria misy mpitondra fanovàna hafa koa toy ny orana mifafy sy ny onja maro izay mety hampiova ny hafanan'ny toerana fanatodizana. Manodidina ny 29.5°C na 85°F eo ho eo ny hafanan'ny toerana fanatodizana.
Ireo ambany ireo misy fanadihadiana fohy fa tena tsara momba ny sokatra ” luth “: